कोरोना कहर : अब काठमाडौँमा के गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ? (भिडियोसहित) « Khabarhub
कोरोना कहर : अब काठमाडौँमा के गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ? (भिडियोसहित)
काठमाडौँ– कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा कडाई गरिएको छ ।
कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन लागू गरिने भएको छ ।
कोरोनाको रोकथामको लागि तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीसहितका आदेश जारी गरेका छन्। यसअघिको तीन वटै जिल्लाको बैठकले जारी गरेको आदेश उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी आमसभा, जुलुस, सभा, भेला लगायत भीडभाड हुने कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । यस्तै कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने । घर बाहिर निस्कँदा वा सार्वजनिकस्थलमा जाँदा र गाडीमा चढ्दा मास्क अनिवार्य गरिएको छ ।
सार्वजनिक स्थान जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमाहल, रङ्गशाला, हवाईयात्रा, उद्यानलगायतमा जाँदा आगामी माघ ७ गतेदेखि कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड साथमा राखेको हुनुपर्ने लगायतका आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७८, मंगलबार ७ : ५९ बजे